Mpisolovava ny fihaonambe mba hiaraka amin'ny digital Fiovana ao amin'ny birao andavanandro - Alemaina mpisolovava an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Alemaina mpisolovava an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Mpisolovava ny fihaonambe mba hiaraka amin'ny digital Fiovana ao amin'ny birao andavanandro
Mpisolovava nandinika sy niresaka indray mandeha isan-taona manan-danja sy ny fiantraikan'ny fiovana haingana eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana ao amin'ny asa ara-dalànaEo anoloan'ny varavaran'ny mpisolovava maimaim-poana manome mahaliana, zava-baovao sy ny fampiharana ny fampandrosoana amin'ny ohatra azo ampiharina - antoka avy ny mba mijery ny baolina kristaly. Pejy fandraisana, ny Twitter, ny haino aman-Jery Sosialy sy ny YouTube: Inona, ahoana ary nahoana, inona no mafy orina. Rehetra ireo, ny matihanina sy ny mpanao ireo - ny foto-kevitra, ny fiainana andavanandro sy ny fiantsoana. Mpandray anjara rehetra dia ny matihanina sy ny mpanao - misokatra, feno ny te hahafanta-javatra, sy ny fanoloran-tena ny asa. Fianarana ny fifandraisana siansa amin'ny sakafo mandra-ny mpanorina ny sampan-draharaha, Benning, Gluth Mpiara-miasa, tamin'ny. Nanomboka avy eo, ao ny toro-hevitra sy ny famolavolana digital-analog Manoro hevitra ary niaraka roa-polo taona, ny lalàna sy ny orinasa miaraka amin'ny fanindriana ny"mpahay lalàna ary mpisolovava amin'ny maha-mpandraharaha". Ny mpanoratra ao amin'ny"ampiharina ny boky fampianarana ny mpisolovava-barotra" Famahanam-bolongana nanomboka tamin'ny taona momba ny lohahevitra IZANY, ny haino aman-jery, ny fiarovana ny angon-drakitra sy ny asa ny lalàna.
Hatramin'ny taona ny lalàna mafy any Hamburg miaraka amin'ny ireo fiaraha-Mientana.
Mifandray amin'ny fitiavana lehibe - na tamin'ny haino aman-jery sosialy, analog tambajotra, na amin'ny maha-mpandaha-teny. Nanao fanazaran-tena ho dimy amby roa-polo taona tao amin ny lalàna mafy, efa ho roapolo taona ny fampianarana ny asa ara-dalàna, dia ny lalàna sy ny Varotra, ireo mpianatra asa. Ara-dalàna ny fikarohana manokana, hatramin'ny taona, ary fito ambin'ny folo taona ny raharaha ara-dalàna ny asa, hatramin'ny telo taona ny fanofanana manamboninahitra.
Java programa (SGD), ny fampandrosoana sy ny boky isan-karazany ny lalàna Fampiharana ho an'ny Android sy ny iOS, mpikambana ao amin'ny BRAK Komity ho an'ny ERV, developer rindrambaiko fitaovana ho an'ny fananganana ny mandeha ho azy ny tahirin-kevitra mba DSGVO amin'izao fotoana izao nanenjika ny Doctorat ao amin'ny faritra ny digitalization ny indostria ara-dalàna ary dia nahazo ny toy ny"Vehivavy-Dalàna momba ny Teknolojia".
Ho AZY tompon'andraikitra, mandra-pahatapitry ny volana Martsa amin'ny taona, Filohan'ny faritra fitsarana Landshut, azo ampiharina ny zavatra niainany tao amin'ny piloting ny Eustace.
Fanao roa-polo taona tao amin ny lalàna mafy, manam-pahaizana manokana mpisolovava ho an'ny fianakaviany ny lalàna, Ara-Teknolojia-Fo, fanolorana ny asa ny Mpisolovava, sy ny tsy dingan. Maro ny traikefa nandritra ny taona maro toy ny vokatra Mpitantana ny birao rindrambaiko sy ny fitiavana ho nomerika ny Fiovana.
Rehefa hatsangana ny fomba fiasa: Polonina, Hongria talohan'ny EU sazy RT malagasy
Don - Definisyon ak siyifikasyon
© 2021 Alemaina mpisolovava an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.